Ahoana no ahafahan'ny olona sy ny planeta miara-miaina ao Harmony ary mamorona asa 380,000
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Arabia Saodita » Ahoana no ahafahan'ny olona sy ny planeta miara-miaina ao Harmony ary mamorona asa 380,000
Janoary 11, 2021
Arabia Saodita taorian'ny nanokafana ity firenena nikatona ity dia novolavolaina ho loharanom-baovao ivelan'ny boaty, saingy hevitra azo tanterahina. Natolotry ny Printsy Saodiana NY LINE dia revolisiona amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe ao amin'ny NEOM, ary natao ho toy ny drafitra ahafahan'ny olona sy ny Planet Earth mivoaka miaraka amin'ny firindrana, fomba Saodiana.
Andriana Saodiana iray nanomboka nanangana ny ho avy. Ny fahitany azy dia ny tsy mila fiara ary ny drafiny dia afaka ampiasaina ho toy ny rafitry ny fiainana an-tanàn-dehibe sy ny angovo madio. Ny planeta Tany dia afaka miara-miaina mirindra.
Ity drafitra ity dia kasaina hamoronana asa 380,000 amin'ny ho avy ary hanome 48 $ $ ho an'ny harin-karena faobe an'i Saudi Arabia amin'ny 2030
Ny Mpanjaka Andriamatoa Mohammed bin Salman, Printsy Crown ary ny filan-kevi-pitantanana ny orinasa NEOM, dia nanambara ny LINE, revolisiona iray amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe ao NEOM, ary drafitra iray ahafahan'ny olona sy ny planeta miara-miaina mirindra.
NY LINE, fehikibo 170km ho an'ny vondrom-piarahamonina ho avy mifampitohy, tsy misy fiara sy arabe ary namboarina manodidina ny natiora, dia valiny mivantana amin'ireo fanamby maika atrehin'ny olombelona ankehitriny toy ny fotodrafitrasa lova, fandotoana, fifamoivoizana ary ny fitohanan'ny olombelona.
Vato fehizoro an'ny Saudi Vision 2030 sy motera toekarena ho an'ny Fanjakana, hitondra fiara isan-karazany izy io ary mikendry ny handray anjara amin'ny asa 380,000 amin'ny ho avy ary ny SAR180 miliara (USD48 bn) amin'ny harin-karena faobe amin'ny 2030.
Hoy ny Royal Highness: "Nandritra ny tantara dia nisy tanàna naorina hiarovana ny olom-pireneny. Taorinan'ny Revolisiona Indostrialy, ny milina dia manome laharam-pahamehana ireo milina, fiara ary ozinina mihoatra ny olona. Any amin'ireo tanàna heverina fa mandroso indrindra eto an-tany, mandany taona maro amin'ny fiainany ny olona rehefa mandehandeha. Amin'ny taona 2050, hitombo roa ny faharetan'ny fiara-mandeha. Amin'ny 2050, olona iray lavitrisa no tsy maintsy mifindra toerana noho ny fiakaran'ny vidin'ny famoahana CO2 sy ny haavon'ny ranomasina. 90% ny olona mifoka rivotra maloto. Nahoana isika no tokony hahafoy ny natiora ho fampandrosoana? Fa maninona no olona fito tapitrisa no tokony ho faty isan-taona noho ny loto? Nahoana isika no tokony hamoy olona iray tapitrisa isan-taona noho ny lozam-pifamoivoizana? Ary maninona isika no tokony hanaiky ny fandaniam-bola nandritra ny taona maro? ”
"Noho izany, mila manova ny foto-kevitry ny tanàna mahazatra ho lasa futuristic isika," hoy ihany ny Royal Highness. “Androany, amin'ny maha filohan'ny filankevi-pitantanan'ny NEOM anao, dia manolotra anao ny LINE aho. Tanàna iray tapitrisa mponina manana halavirana 170 km izay mitahiry ny natiora 95% ao anatin'ny NEOM, miaraka amin'ny fiara aotra, arabe aotra ary famoahana karbaona aotra. ”
NY LINE dia sambany tao anatin'ny 150 taona izay nanamboarana fampandrosoana lehibe an-tanàn-dehibe manodidina ny olona fa tsy arabe. Ny fivezivezena dia hamaritra ny fiainana amin'ny LINE, ny serivisy ilaina isan'andro, toy ny sekoly, tobim-pitsaboana, toeram-pialam-boly, ary koa ny toerana maitso, dia ao anatin'ny dimy minitra an-tongotra.
Ny vahaolana fitaterana haingam-pandeha haingam-pandeha sy vahaolana amin'ny fivezivezena mahaleo tena dia hanamora ny fivezivezena ary hanome ny fotoana ny mponina hangataka fotoana handany fahasalamana sy fiadanam-po. Antenaina fa tsy mihoatra ny 20 minitra ny dia.
Ny vondrom-piarahamonina THE LINE dia hanana kognitika, ampiasain'ny Art Intelligence (AI), mianatra tsy tapaka ireo fomba vinavina hanamorana ny fiainana, mamorona fotoana ho an'ny mponina sy ny orinasa. Tombanana ho 90% ny angon-drakitra misy no hampiasaina hanatsarana ny fahaiza-manao fotodrafitrasa mihoatra ny 1% izay ampiasaina amin'ny tanàna manan-tsaina.
Ny famaritana ny faharetana, ny LINE dia ahitàna fivoarana an-tanàn-dehibe miorina amin'ny karbaona ampiasain'ny angovo madio 100%, manome tontolo tsy misy fandotoana, fahasalamana ary maharitra kokoa ho an'ny mponina. Ireo vondrom-piarahamonina mifangaro fampiasa dia hatsangana manodidina ny natiora fa tsy ambonin'izany.
Ny sehatry ny NEOM amin'ny ho avy, tarihin'ny mpitarika indostrialy manerantany, dia efa miatrika ny sasany amin'ireo fanamby maika manerantany. Izy ireo dia mpisava lalana amina tsena vaovao amin'ny fanavaozana zava-baovao ary mamorona fotoana hisarihana ny talenta, ny mpampiasa vola ary ny mpiara-miombon'antoka mba ho lasa anisan'ny tontolon'ny asa aman-draharahany.
Ny fananganana ny LINE dia hanomboka amin'ny Q1 of 2021. NY LINE dia iray amin'ireo tetik'asa fotodrafitrasa sarotra indrindra sy sarotra indrindra eran'izao tontolo izao ary ampahany amin'ny asa fampandrosoana efa an-dàlam-be any NEOM.
NEOM dia ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena, misy karazany maro samihafa ao amin'ny Tahirim-bolam-bolam-panjakana Saudi Arabia, iray amin'ireo vola manan-karena lehibe indrindra manerantany.
Momba an'i NEOM
NEOM dia mpiorina ny fandrosoan'ny olombelona ary fahitana ny mety ho endrik'ilay Hoavy Vaovao. Izy io dia faritra any avaratrandrefan'i Arabia Saodita eo amin'ny Ranomasina Mena atsangana hatramin'ny fototra ho laboratoara velona - toerana iray hanoratan'ny mpandraharaha ny làlana ho an'ity New Future ity. Ho lasa toerana sy trano ho an'ireo olona manonofinofy be sy maniry ny ho anisan'ny fananganana modely vaovao hivelomana miavaka io, hamorona orinasa mandroso, ary hamerenana amin'ny laoniny ny fiarovana ny tontolo iainana.
NEOM no ho trano sy toeram-piasana ho an'ny mponina mihoatra ny iray tapitrisa manerantany. Anisan'izany ny tanàna sy tanàna, seranan-tsambo sy ny faritra misy orinasa, ivon-toeram-pikarohana, toeram-panatanjahantena sy fialamboly ary toerana itodian'ny mpizahatany. Ho ivon'ny fanavaozana, ny mpandraharaha, ny mpitarika orinasa ary ny orinasa dia ho avy hanao fikarohana, hampiditra ary hanao varotra teknolojia sy orinasa vaovao amin'ny fomba mamaky tany. Ny mponina ao amin'ny NEOM dia hanana etona iraisam-pirenena ary hanaiky ny kolontsaina fikarohana, ny fanaovana risika ary ny fahasamihafana - izy rehetra dia tohanan'ny lalàna mandroso mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary mahatonga ny fitomboan'ny harinkarena.